by Hsumon on Tue Aug 18, 2009 11:27 am
ဒီ site လေးရဲ့ လိပ်စာကို သူငယ်ချင်းကပေးတာ ပါ။ကိုယ်လဲ မုံရွာ ကွန်ပျူတာ ကျောင်းဆင်းဆိုတော့
အသင်းဝင်မယ် လို့စိတ်ကူးခဲ့တယ်၊ အဲဒီမှာ ချီတုံချီချ ဖြစ်နေသေးတယ်၊
သူငယ်ချင်းကို လှမ်းမေးလိုက်တယ် ငါ အသင်းဝင်ချင်တယ်လို့၊ သူကပြောတယ် Register လုပ်လိုက်တဲ့
အဲဒါကတော့ သူပြောမှသိမှာလားနော် ရိုက်ချင်လိုက်တာ စတာပါ။ တကယ်တမ်း က Register လုပ်ပြီးရင် ကိုယ်ကိုကိုယ် မိတ်ဆက်ရမယ်၊ စဉ်းစားမိတယ် ငါ ဘယ်လိုရေးရမလဲလို့ သူငယ်ချင်းအသစ်နဲ့ စတွေ့သလို ” တွေ့ရတာ ၀မ်းသာ ပါတယ်” လို့ပြောရမလား၊ “ အသင်းဝင်အသစ်ပါ ” လို့ ပြောရမလား စဉ်းစားရင်းနဲ့ ပဲ ဒီလိုရေးပြီး မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်၊
2007 ခုနှစ်မှာ ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်
B.C.Sc ( Hons: ) ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်
အခု ရန်ကုန် မှာ ရုန်းကန်နေပါတယ် တစ်နေ့ ချမ်းသာနိုးနဲ့ပါ၊
by winkoko on Tue Aug 18, 2009 11:51 am
ဒီ forum လေး ထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ တွေ့ဆုံအလွမ်းသယ်နိုင်ပါစေ...
မှတ်ချက် ။ ။ ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းသာ အတင်းမပြောရ အဟဲ..
by Hsumon on Tue Aug 18, 2009 11:58 am
Location : Salingyi Township, Monywa District, Sagaing Division
by heintaezarmyo on Fri Dec 11, 2009 2:25 pm
ကျွန်တော်ဒီဆိုဒ်လေးကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောင်းတုန်းကပျော်စရာအဖြစ်အပျက်ကလေးကို သတိရမိတယ်ဗျာ။
ကျောင်းမှာ roll call မပြည့်လို့ ဒေသန္တရဆေးပေးခန်းကိုသွားပြီး ဆေးခွင့်ယူခဲ့ရတာကို အရမ်းသတိရတယ်ဗျာ။
နောက်ပြီး မိဘတွေခေါ်၊ မိဘအတုတွေလုပ်၊ ထန်းရည်ဆိုင်ကဦးသောင်းကြီးကိုခေါ်ပြီး ကျွန်တော့်ဦးလေးပါလို့ပြောလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုအခုထိမှတ်မိသေးတယ်ဗျာ။
by winkoko on Sun Dec 13, 2009 1:07 pm
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျွန်တော် များသောအားဖြင့် တစ်ရက်ကို တစ်ခါလောက် ၀င်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်..
ဘယ်သူမှလည်း တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ စာလေးဘာလေးမရေးကြဘူးနော်..
သူငယ်ချင်းများအားလုံးရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို စောင့်မျှော်လျက်
by heintaezarmyo on Sun Dec 13, 2009 3:50 pm
ကိုဝင်းကိုကိုက senior တန်းကဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့က 2006 ကျောင်းသားတွေပါ။ ကျွန်တော်လည်းအစ်ကို့လိုပါပဲဗျာ။ ဒီဆိုဒ်လေးကိုသိတဲ့အချိန်ကစပြီးဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်းတစ်ယောက်မှ မတွေ့ဘူး။ လိုအပ်တာကတော့သိပ်မရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေပဲလိုတော့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်းအားလုံးနဲ့ဝေးနေတာ2နှစ်ရှိ သွားပြီလေ။
by winkoko on Tue Dec 15, 2009 3:17 pm
heintaezarmyo wrote: ကိုဝင်းကိုကိုက senior တန်းကဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့က 2006 ကျောင်းသားတွေပါ။ ကျွန်တော်လည်းအစ်ကို့လိုပါပဲဗျာ။ ဒီဆိုဒ်လေးကိုသိတဲ့အချိန်ကစပြီးဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်းတစ်ယောက်မှ မတွေ့ဘူး။ လိုအပ်တာကတော့သိပ်မရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေပဲလိုတော့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်းအားလုံးနဲ့ဝေးနေတာ2နှစ်ရှိ သွားပြီလေ။
ကျွန်တော်က ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၆ ထိ တက်ခဲ့တာပါ..
စီနီယာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး တူတူလောက်ပါပဲ..
သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဘယ်သူမှ မလာကြဘူးဗျာ..
မသိတာတွေ မေးကြမယ်.. သိတာတွေ ရှယ်ကြမယ်လေ..ဗျာ..
လာကြပါဗျာ..အားလုံးကို စောင့်နေပါတယ်.. လို့..
Location : north okkalapa , yangon
by soegyi on Thu Dec 17, 2009 2:30 pm
internet သုးံရင်းပျင်းလို့ search engine မုံရွာလို့ရိုက်လိုက်တာဒီ site လေးကိုတွေ့တာပါ
အားလုးံ ကိုသတိရတယ်ဗျာ ကျွန်တော်က 04 ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ BE တွေရောထားတဲ့
ဦးသောင်း ဖိုးတောကို သောက်ရတာကအစ မြသီတာ အဆောင်ကို မှုးပြီး ခဲနဲ့ ပေါက်တာက အလယ် ရွှေအိုးစည်မှာ အကြွေးသောက်ပြီး guiter သွားတီးတာ ပေါတွေ အားလုးံ အားလုးံ
ပဲပေါ့ အော်မေ့လို့ ကျွန်တော်က စိုးကြီးပါ ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုးံ ကိုတွေ့ချင်တယ်ဗျာ
ကိုဝင်းကိုကိုရေ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရောက် ရင်ပြောဦးနော် ကျောင်းသီချင်းတွေကြားတိုင်း
by winkoko on Thu Dec 17, 2009 2:41 pm
soegyi wrote: မင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဒီမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နွေးနွေးထွေးထွေး ခင်ခင်မင်မင်
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပို့စ်တွေကို မျှော်လင့်နေသော
Location : ၆၆/၆၈ တိုက်(A)3D၊အင်းစိန်လမ်း၊ စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
by ဇော်အေး on Wed Dec 30, 2009 4:18 pm
ကျတော်ကတော့ ကွန်ပျူတာကျောင်းမှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမျာလုပ်မလားဆိုပြီးစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့ပဲ ကွန်ပျူတာကျောင်းမှာတော်တော်ကြာအောင်နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီ site လေးက ကျနော်တို့လိုကျောင်းနဲ့ဝေးသွားတဲ့သူတွေအတွက် အလွမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ
ဒီ site လေးကိုတွေလိုက်တော့ကျောင်းတုန်းက အဖြစ်ပျက်တွေကို ပြန်ပြိးသတိရမိတယ်ဗျာ
by PHOENIX on Thu Dec 31, 2009 8:40 am
ဇော်အေး wrote: ကျနော့်ရဲ့နာမည်ကတော့ဇော်အေးပါခင်ဗျ
Location : မုံရွာ၊ ကြေးနီ
by AungZaw on Sat Jan 23, 2010 3:42 pm
သူငယ်ချင်း အားလုံး မင်္ဂလာပါ....တစ်ခြား Forum တွေကိုရောက်ပေမယ့်...ဒီ ဆိုက်ကိုမ၀င်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပါတယ်...ဒီနေ့ မှပဲ မေးလ်တွေ ကို ၀င်စစ်မိမှ အလည်လာဖို့ ဖိတ်ထားတာကို တွေ့ လို့ ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်...အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဒီဝက်ဆိုက်ကို မေ့နေတာလည်း ပါပါတယ်...၀က်ဆိုက်မမှတ်မိတာပါ....ဒီဝက်ဆိုက်လုပ်ထားတာနည်းနည်းတော့ ကြာပြီနော်..ဒါပေမယ့်..အခုထိ သိပ်ပြီးမတိုးတက်သေးသလိုပဲ...သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ပညာတစ်ယောက်ဖလှယ်ကြဖို့ အများကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်....ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် တင်ပေးပါ့မယ်..ကျနော် သိသလောက်ပေါ့....အားလုံး ၀ိုင်းဝန်ပူးပေါင်းဖို့ လည်း လိုပါတယ်....သူငယ်ချင်း၇ဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဖြန့် ဝေကြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်..ကျနော်က Admin အဖွဲ့ က မဟုတ်ပေမ့ယ်...ဒီ forum လေးတိုးတက်အောင်တော့ ဆောင်ရွက်ပေးချင်ပါတယ်...အားလုံးကို ခင်မင်ပါတယ်.....
by PHOENIX on Mon Jan 25, 2010 7:12 am
AungZaw wrote: သူငယ်ချင်း အားလုံး မင်္ဂလာပါ....တစ်ခြား Forum တွေကိုရောက်ပေမယ့်...ဒီ ဆိုက်ကိုမ၀င်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပါတယ်...ဒီနေ့ မှပဲ မေးလ်တွေ ကို ၀င်စစ်မိမှ အလည်လာဖို့ ဖိတ်ထားတာကို တွေ့ လို့ ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်...အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဒီဝက်ဆိုက်ကို မေ့နေတာလည်း ပါပါတယ်...၀က်ဆိုက်မမှတ်မိတာပါ....ဒီဝက်ဆိုက်လုပ်ထားတာနည်းနည်းတော့ ကြာပြီနော်..ဒါပေမယ့်..အခုထိ သိပ်ပြီးမတိုးတက်သေးသလိုပဲ...သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ပညာတစ်ယောက်ဖလှယ်ကြဖို့ အများကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်....ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် တင်ပေးပါ့မယ်..ကျနော် သိသလောက်ပေါ့....အားလုံး ၀ိုင်းဝန်ပူးပေါင်းဖို့ လည်း လိုပါတယ်....သူငယ်ချင်း၇ဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဖြန့် ဝေကြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်..ကျနော်က Admin အဖွဲ့ က မဟုတ်ပေမ့ယ်...ဒီ forum လေးတိုးတက်အောင်တော့ ဆောင်ရွက်ပေးချင်ပါတယ်...အားလုံးကို ခင်မင်ပါတယ်.....
Forum လေးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ.
by woodoe on Sun Aug 28, 2011 6:18 pm